၂၀၂၁ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း ခြင်း စာရင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် - Pandaily
Jan 10, 2022, 20:00ညနေ 2022/01/10 23:17:16 Pandaily
ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် China Automobile Dealers Association (CADCC) နှင့် Chegu တို့ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် “2021 တရုတ် မော်တော်ယာဉ် Value ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အစီရင်ခံစာ.
အစီရင်ခံစာ သည် China Automobile Industry Association မှ ခြေရာခံ သည့် စျေးကွက် အချက်အလက်များနှင့် Che Valley မှ ခန့်မှန်း ထား သောကား ဟောင်း အချက်အလက်များ ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး တရုတ် မော်တော်ယာဉ် စျေးကွက် ၏တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း မှုနှုန်းကို ညွှန်ပြသည်။ လွတ်လပ် သော၊ ဖက်စပ် နှင့် တင်သွင်းသော မော်ဒယ် များအပါအ ၀ င် အချိန် ကြာ လာသည်နှင့်အမျှ ကားများ ၏တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း မှုနှုန်းကို အစီရင်ခံ စ ာက ခြေရာခံ သည်။
စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ၏တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း မှုနှုန်း စာရင်းတွင် Wuling Hongguang MINIEV သည် တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း မှုနှုန်း ၈၉. ၇၈% ဖြင့် ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။ Xiaopeng P7 သည် ၈၅. ၆၇% ဖြင့် ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး Tesla Model3သည် ၈၄. ၆၇% ဖြင့် တတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ ေနာက္ထပ္ တက္ စ လာ ေမာ္ဒယ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Model Y ကေတာ့ နံပါတ္ ၅ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
BYD Ham သည် ၇၉. ၃၆% ခန့်ရှိပြီး နံပါတ် ၆ နေရာတွင် ရှိပြီး GAC Aion V, NIO ES6, GAC Aion S နှင့် BYD Tang တို့သည် သတ္တမ မြောက် မှ ၁၀ ခုမြောက် အဆင့် တွင်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Toyota နှင့် BYD တို့ ၏ပထမဆုံး စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် ကားကို blade battery ဖြင့် ပြသ ခဲ့သည်
ထုတ်လုပ် သူများအနေဖြင့် ဂျပန် ကား အမှတ်တံဆိပ် သည် ၇၁. ၉၁% ဖြင့် အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုး ကိုထိန်းသိမ်း ထားပြီး ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။ ဂျာမန် နှင့် ကိုရီးယား ကား များကို ဒုတိယ နှင့်တတိယ နေရာတွင် ထား ရှိပြီး တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း မှုနှုန်းသည် ၆၀% အထက် တွင်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တရုတ် ကား အမှတ်တံဆိပ် များ ၏တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း မှုနှုန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် သတ္တမ မြောက် နေရာမှ ယခု နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာတွင် စတုတ္ထ နေရာ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
NIO သည် အာမခံ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ရန် ဒေါ်လာ ၇. ၉ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်
Tianyancha APP အရ NIO Insurance Brokerage Co., Ltd. သည် မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး ယွမ်သန်း ၅၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇. ၉ သန်း) ဖြင့် မကြာသေးမီက တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကို တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ NIO က ရာနှုန်းပြည့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
Auto Jan 24 ဇန်နဝါရီ 24, 2022
Tesla က ၎၏ ပထမသံုးလပတ္တြင္ လၾကတ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္၏ ဝါဒျဖန္႔မႈ အက်ပ္အတည္းကို
၂၀၂၁ တွင် စတင်မည်ဟု ကြေညာခဲ့သော်လည်း ခွန်အားနှင့် ပေးပို့မှုပမာဏတို့မှာ စံချိန်တင်မြင့် တက်ခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကားဈေးကွက်တွင် ဝါဒဖြန့်ချိရေး အကျပ်အတည်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော Tesla က ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲနေဆဲ ဖြစ်သည်။
Industry Apr 28 ဧပြီ 28, 2021